Dhijitari Management Chishandiso cheshuga-Dhijitari Management Chishandiso Solution-Sinocare
Dhijitari Management Chishandiso cheshuga
Marwadzo Points eDhiabetes Management
Chirwere cheshuga rave dambudziko rehutano hwepasirese, uye kuwanda kwechirwere cheshuga kuri kuwedzera, izvo zvinounza mutoro unorema kunharaunda nevanhu. Zvakare, kuseri kwehuwandu hwevanhu vane chirwere cheshuga, pane dambudziko rekudzikira kweshuga muropa, uye kutevedza kwemurwere kwakaderera chikonzero chakakosha chedzimba rekudzora mwero. Kubva pamaonero emagariro nemaindasitiri, kuwedzera kwechirwere cheshuga kunoreva kuwedzera kwekugara muchipatara uye mari yekurapwa, kuwedzera mutoro weinishuwarenzi yekurapa uye kuwedzera kunoenderana kwemabhizimusi einishuwarenzi. Panguva imwecheteyo, nekuti mishonga yaifanirwa kunge yakashandiswa nevarwere yakanga isingabatsiri uye zviratidzo zvaifanirwa kunge zvakaongororwa hazvina kuitwa, huwandu hwekutengesa hwemakambani emishonga nemidziyo hwakakanganiswa zvakare.
Munguva yakapfuura, manejimendi kutevedzera kwevarwere vechirwere cheshuga yaive yakaderera, izvo zvainyanya kukonzerwa nekushaikwa kwekushomeka kwedhata uye maturusi maturusi Multi-dimensional dhata ndiyo poindi yekutanga yekuongorora kwevarwere maitiro uye manejimendi manejimendi. Seyechitanhatu-chinzvimbo cheglucose yemamita eropa mugadziri munyika, Sinocare inogona kupa yakangwara michina yekuona yezviratidzo zvakasiyana (shuga yeropa, uric acid, BP, ropa lipid, saccharification, nezvimwewo), kushandira pamwe nekushandisa nharembozha, uye pamwe kupa inoshanda kuunganidzwa kwedata uye ekushandisa maturusi evarwere.
Dhijitari Management uye Yekuona Chishandiso cheshuga
Sinocare inopa yepamusoro yeropa glucose, ropa lipid, uric acid uye mamwe maturu ekuona ane mhedzisiro chaiyo uye kuita kwakanakisa, uye inogona kupa mhinduro dzakasiyana siyana dzekufambisa dhata uye manejimendi.
Zvipatara / makiriniki
Mishonga emakambani / ekuchengetedza hutano emakambani
Internet hutano manejimendi sangano
Kambani yeinishuwarenzi yekambani
1. Sinocare inopa Bluetooth inonzwisisika yekuona maturusi uye yeBluetooth yekutaurirana protocol kana SDK, iyo inogona kuwana iyo yevatengi-yevaridzi kana yechitatu-bato APP kuti ione otomatiki data kutapurirana nekuchengetedza.
2. Sinocare inopa maturusi ekuziva ekuziva kweBluetooth, uye zvakare inopa Sinocare's yega ropa glucose data manejimendi APP uye neshure, kuti uzive kuiswa kwevarwere marekodhi ehutano, index index, otomatiki data kufambisa, otomatiki kuchengetedza, otomatiki kuongorora uye nhoroondo rekodhi ongororo.
3.Kubatana kwakadzika: Sinocare inopa yakangwara Hardware uye yakagadzirirwa software masevhisi zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.